Ahoana ny fomba hijerena ireo lisitry ny lahatahiry eo an-toerana | Martech Zone
Ny lahatahiry eo an-toerana dia mety ho fitahiana sy ozona ho an'ny orinasa. Misy antony telo lehibe hijerena ny lahatahiry eo an-toerana:
Fahitana sarintany SERP - Tsy tsapan'ny orinasa matetika fa ny fanananao orinasa sy tranokala iray dia tsy voatery hampiseho anao amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana. Ny asanao dia tsy maintsy tanisaina ao Google Business hahazoana fahitana amin'ny fizarana sarintany pejy valin'ny motera fikarohana (SERP).
Laharana biolojika - lahatahiry maro no tsara tanisaina mba hananganana ny laharam-pahamehana biolojika sy ny fahitana ny tranonkalanao (ivelan'ny Sarintany).
Rindrambaiko momba ny lahatahiry - mampiasa lahatahiry ny mpanjifa sy ny orinasa hahitana fivarotana antsinjarany, trano fisakafoanana, mpamatsy serivisy sns hahafahanao mahazo orinasa tanteraka amin'ny lisitrao.
Tsy tsara foana ny lahatahiry eo an-toerana
Na dia misy tombony aza ny lahatahiry eo an-toerana, tsy tetika lehibe foana izany. Ireto misy olana amin'ny lahatahiry eo an-toerana:
Varotra manafika - ny lahatahiry eo an-toerana matetika dia mahazo ny volany amin'ny alàlan'ny fanesorana anao amin'ny lisitra premium, doka, serivisy ary fampiroboroboana. Matetika kokoa, ireo fifanarahana ireo dia maharitra ary tsy misy mari-pamantarana mifandraika amin'izany. Ka, na dia toa hevitra tsara aza ny voatanisa eo ambonin'ny namanao… raha tsy misy mitsidika ny lahatahiry azy ireo dia tsy hanampy ny orinasanao izany.
Ny lahatahiry mifaninana aminao - Ny lahatahiry eo an-toerana dia manana tetibola be ary mifaninana aminao ara-nofo. Ohatra, raha tampon-trano eo an-toerana ianao, ny lahatahiry ho an'ny lisitry ny tampon-trano eo an-toerana dia hiasa mafy hahazoana laharana ambonin'ilay tranonkalanao. Tsy lazaina intsony fa hanolotra ny fifaninanana rehetra ataonao miaraka aminao izy ireo.
HANATRIKA anao ny lahatahiry sasany - Misy lahatahiry sasany feno fidirana an-tapitrisany amin'ny spam, malware, ary tranokala tsy mendrika. Raha mifamatotra amin'ireo pejy ireo ny fonenanao dia mety handratra ny laharanao amin'ny fampifandraisana anao amin'ireo tranonkala ireo.
Serivisy fitantanana ny lahatahiry eo an-toerana
Toy ny olana ara-barotra rehetra any, misy sehatra iray hanampiana ireo tompona orinasa na masoivohon'ny marketing hitantana ny lisitra misy azy ireo. Izaho manokana dia mamporisika ny orinasa hitantana ny kaonty Google Business azy ireo mivantana amin'ny alàlan'ny fampiharana finday Google Business - fomba iray tsara hizarana sy fanavaozana ireo tolotra eo an-toerana anao, hizarana sary ary hifandraisana amin'ireo mpitsidika ny SERP.
Semrush no sehatra tiako indrindra amin'ny fikarohana sy ny fanaraha-maso ny fahitana ny motera'ny mpanjifako. Nanitatra ny fanatiny ho lisitra ao an-toerana izy ireo izao miaraka amina lisitra vaovao fitaovana fitantanana lisitra!
Zahao ny fahitana lisitra eo an-toerana
Ny zavatra voalohany azonao atao dia ny manamarina ny lisitra nataonao. Ampidiro ny firenena, anaran'ny orinasa, adiresy an-dalambe, kaody zip, ary nomeraon-telefaona an'ny orinasanao:
Semrush dia manome anao lisitry ny lahatahiry manana fahefana be dia be miaraka amin'ny fanolorana lisitra anao. Ny valiny dia manaparitaka ny valiny amin'ny:
Present - eo amin'ny lahatahiry lisitra eo an-toerana ianao ary marina ny adiresy sy ny nomeraon-telefaoninao.
Miaraka amin'ny olana - eo amin'ny lahatahiry lisitra eo an-toerana ianao fa misy olana amin'ny adiresy na nomeraon-telefaona.
Tsy Manatrika - tsy eo amin'ireto lahatahiry lisitra manan-kaja eo an-toerana ireto ianao.
Tsy vonona - ny lahatahiry resahina dia tsy tratra.
Raha tsindrio ianao Tsinjara ny mombamomba, afaka mandoa vola isam-bolana ianao, ary Semrush dia hisoratra anarana ny lisitry ny lisitra izay tsy isehoany, manavao ny fidirana izay ataony raha tsy misy fidirana misy, ary manohy mitazona ny lahatahiry isam-bolana.
Endri-javatra fanampiny an'ny Semrush Lisitry ny faritra
Google Map Heatmap - Jereo tsara ny fahombiazanao amin'ny valin'ny Google Map amin'ireo faritra manodidina ny orinasanao. Rehefa mandeha ny fotoana dia azonao atao ny manaraka ny fivoaranao tsara.
Fanamafisana ny fikarohana amin'ny feo - Mikaroka ny feony izao ny olona mihoatra ny taloha. Semrush manao izay hahamety ny lisitry ny fangatahana am-peo.
Araho ary valio ny hevitra - Jereo ny tsikera rehetra momba ny orinasanao ary makà fepetra ara-potoana hitazomana ny lazan'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny famaliana amin'ny Facebook sy Google Business.
Tantano ny tolo-kevitry ny mpampiasa - Jereo ny fiovana amin'ny lisitra naroson'ireo mpampiasa anao ary ankatoavy izy ireo na lavo.
Mitadiava ary esory ireo orinasa sandoka - Mety misy mpisandoka manana anarana mitovy aminao amin'ny Internet. Amboary izay olana mifandraika amin'izany!
Zahao ny lisitra eo an-toerana
Fambara: mpiara-miasa amin'i Lisitra eo an-toerana Semrush
Tags: lahatahiry orinasajereo ny lahatahiry eo an-toeranajereo ny lisitra eo an-toeranalahatahiry eo an-toeranafikarohana eo an-toeranafilaharana fikarohana eo an-toeranaseo eo an-toerana
Khoros Marketing: Marketing sy fitantanana haino aman-jery sosialy ho an'ny orinasa